Mpanamboatra sy mpamatsy mpiorina amin'ny Pad Mounted Transformer | China Pad Mounted Transformer Components
35kV fanapoizinana solika roa-natsofoka solika
Switch switchloaded efatra-natsipin'ny solika
12kV 630A famonosana entana misy toerana efatra feno menaka dia natao ho an'ny kabinetra fanovana peratra US-box izay natao hihaona amin'ny fenitra IEEE, IEC ary GB amin'ny fepetra takiana rehetra. Azo ampiasaina amin'ny rafitra mifototra amin'ny tany na ambanin'ny tany. Ny famindrana enta-mavesatra efatra-milentika amin'ny solika ao anaty fametrahana, manakaiky ny fotodrafitrasa miova dia afaka mampihena ny fifandraisana anatiny Cable capacitance, ary amin'izany dia mampihena be ny loop ao amin'ny resonance ferromagnetic. Ny fametrahana ny lafiny roa sy ny fametrahana ambony dia misy Ho an'ny ankapobeny ...
Switch switchbreak roa-toeran'ny solika
Ny switch switchbreak misy toerana roa natsipin'ny solika dia ampiasaina indrindra amin'ny fanovana boaty amerikana karazana terminal, miaraka amin'ny rafitra fiasa lohataona, dia fifamatorana fifandraisana telo-dingana hamita ny asa fanapahana entana sy famaranana. Amin'ny alàlan'ny famindrana enta-mavesatra roa dia azo atao koa ny mifangaro amin'ny karazana rafitra miova ho an'ny rafitra fizarana karazana peratra, fanjakana miova toerana roa: on, off. Ny isa 10kV dia azo ampiasaina amin'ny tetik'asa herinaratra amin'ny alàlan'ny fanovana. Alohan'ny hampiasana ny trafo dia mila maina. M ...